Thursday April 18, 2019 - 20:40:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa sii xoogeystay dagaallada ka holcaya wadanka Liibiya ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika waxaana guuldarrooyin lakulmaya ciidamada dagaal Ooge Khaliifa Xaftar.
Wararka ka imaanaya Koonfurta wadanka Liibiya ayaa sheegaya in ciidamada xukuumadda Alwifaaq ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta garoon Melleteri oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Xaftar.
Afhayeen u hadlay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Daraabulis ayaa xaqiijiyay in ciidamadoodu ay qabsadeen garoonka Tamanhanat ayna burburiyeen dhismayaal muhiim ah islamarkaana ay gacanta kusoo dhigeen gaadiid dagaal iyo saanado melleteri.
Bayaan kasoo baxay Khaliifa Xaftar ayaa lagu sheegay in weerar hubeysan uu lakulmay garoonka Tamanhanat oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka haadayeen diyaaradaha duqeymaha ka geysanaya magaalada Daraabulis.
Wariyaal ku sugan wadanka Liibiya ayaa soo sheegay in ciidamada Xaftar laga fogeeyay magaalada caasimadda ah ee Daraabulis iyadoona dagaallada ugu culus ay ka socdaan degmada Gharyaan oo qiyaastii 100Km ujirta magaalada caasimadda ah.
Dhinaca kale warbixin kasoo baxday hay'adda Caafimaadka uqaabilsan Q.Midoobay ayaa lagu sheegay in dadka lagu dilay dagaallada ka socda wadanka Liibiya ay gaareen 250.
Warbixinta waxaa lagu caddeeyay in dadka ugu badan ee dhintay ay yihiin dhinacyadii dagaallamayay balse ay jiraan dad ku dhintay duqeymaha ay diyaaradaha Khaliifa Xaftar ugeysanayaan xaafadaha magaalada Daraabulis.